Sida loo daawado dhacdada Apple 20-ka Abriil online | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan aad ugu dhownahay bilowgii soo bandhiggii rasmiga ahaa ee ugu horreeyay ee Apple ee sannadkan 2021. Xaaladdan oo kale shirkadda Cupertino hubaal waxay bilaabi doontaa moodooyinka cusub ee iPad ama iPad Pro, laga yaabee inay haysato rasaastii ugu dambaysay ee lagu bilaabayo AirTags iyo Dhowr saacadood ka hor ayaa lagu xaman jiray inay sidoo kale bilaabi karaan xoogaa casri ah oo la cusbooneysiiyay oo midab leh.
Dabcan isticmaaleyaasha Apple horeyba waxay rabeen inay arkaan bandhiggii ugu horreeyay ee sanadka sanadkanna lama qabanin bishii Maarso sidii caadiga ahayd, shirkaddu way sugtay ama waa inay sugto halkii Abriil ay ku qaban lahayd Muhiimadeeda.
Sida aan wada ogsoonahay soo bandhigiddan waxaa loo soo marin doonaa fiidiyowga oo ka socda Apple Park, sidaa darteed ma jiri doonaan kaqeybgalayaasha ama warbaahinta khaaska ah ee Cupertino. Laakiin aan tagno waxa aan sameyn doonno, si aan u aragno soo bandhigida, waxa kaliya ee aan sameyno waa:
Toos u gal bogga Apple qalab kasta
Kaaga iska leh Kanaalka YouTube
Waxaad sidoo kale kala socon kartaa dhacdada adoo adeegsanaya caymiska aan ka fulin doono soydemac.com si wadajir ah asxaabteena actualityiphone.com
Fursadaha lagu qaban karo munaasabadda tooska ah waa dhowr oo xusuusnow taas gudaha Spain wuxuu bilaabmi doonaa abaare 19.00:XNUMX pm., hal saac ayaa ka yar jasiiradaha Canary. Dabcan, waxaa jira rajo badan si loo arko waxa Apple na soo bandhigeyso iyo in ay leedahay dhowr alaabood oo la bilaabi karo ama ay ahayd in dib loo cusbooneysiiyo muddo dheer, sida Apple TV ama waxa loogu yeero AirTags locators oo aan la ogeyn halka rasmiga ah ee ay ku sugan yihiin ...
Waxaan rajeyneynaa nuxurka qodobka muhiimka ah!
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Sida loo daawado dhacdada Apple ee 20ka Abriil khadka tooska ah